Fahazarana an'arivony taona sy fahazarana miantsena omni-Channel
Ahoana ny fomba hiarahana amin'ny Arivo Taona + ny fahazarana miantsena omni-Channel
Alakamisy, Aprily 24, 2014 Zoma, Aprily 25, 2014 Kelsey Cox
Miaraka amin'ny finday avo lenta ao anaty paosy tsirairay, ny Millennial dia manana fitaovana ary lasa zatra fomba fiantsenana vaovao. Miaraka amin'ny $ 200 miliara mahery amin'ny herin'ny fividianana isan-taona, ny Millennial dia vondrona iray manan-danja hikarakarana; fa ohatrinona no mandinika azy ireo ny mpivarotra rehefa manavao ny paikadin'ny varotra?
Raha mbola mankafy ny fividianana ao amin'ny magazay ny Millennial, ny 85% dia tia mampiasa ny fitaovany finday hikarohana vokatra alohan'ny hanaovana fividianana. Ireo mpivarotra ambongadiny izay mahatsapa izany dia mitazona ny fisiany an-tserasera ho matanjaka ary mampiasa ny heviny ho tombontsoany. 50% an'ny Millennial no hitsidika ny toeran'ny mpivarotra rehefa omena fihenam-bidy 20% izy ireo, nefa ny 72.7% amin'ireo mpivarotra dia tsy manolotra tapakila finday ho an'ireo mpividy azy. Ireo mpivarotra am-barotra, izay mitondra ny orinasan'izy ireo amin'ny ho avy, mikarakara ny Millennial amin'ny paikadin'izy ireo, dia hahita ny fahombiazana farany amin'ny taona ho avy. Trano fivarotana nanadihady ireo mpividy sy mpivarotra an'arivony arivo mahery, nanolotra ny zavatra hitan'izy ireo tao amin'ny sary etsy ambany.
Tags: millennialsÔmnia-fantsonaantsinjaranyfahazarana fiantsenana
Sarintanin'ny Boom E-Commerce manerantany
Stitch: fitantanana filaminana sy fitantanana inventory mitambatra